Primiti - Serbio - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: primiti (Serbio - Birmano)
jer takav èovek neka ne misli da æe primiti ta od boga.
i koji lutaju duhom orazumiæe se, i vikaèi æe primiti nauku.
nego odbaciste svaki savet moj, i karanje moje ne hteste primiti;
ငါသတိပေးခြင်းရှိသမျှကို သင်တို့သည်ပယ်၍၊ ငါဆုံးမသော စကားတခွန်းကို နားမခံဘဲနေသောကြောင့် ၎င်း၊
a on reèe im: ne mogu svi primiti te reèi do oni kojima je dano.
ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ထိုစကားကို လူတိုင်းမခံမယူနိုင်။ အခွင့်ရသောသူတို့သာ ခံယူနိုင်ကြ၏။
koji neæe primiti vie u ovo vreme, i na onom svetu ivot veèni.
ထိုသခင်သည် မိမိသန့်ရှင်းသူတို့အားဖြင့် ဂုဏ်အသရေတော် ထင်ရှားခြင်းကို၎င်း၊ ငါတို့သက်သေကို သင်တို့သည် ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍၊
ako si pravedan, ta æe mu dati? ili ta æe primiti iz ruke tvoje?
သင်သည် ဖြောင့်မတ်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ အကျိုးတော်ကို အဘယ်သို့ပြုစုနိုင်သနည်း။ သင့်လက် မှ အဘယ်ကျေးဇူးကို ခံတော်မူမည်နည်း။
အရင်ဝင်သောသူတို့သည် လာကြသောအခါ ငါတို့သည်သာ၍ရမည်ဟု စိတ်ထဲမှာထင်မှတ်သော် လည်း ဒေနာရိတပြားစီ ခံရကြ၏။
znajuæi da æete od gospoda primiti platu nasledstva; jer gospodu hristu sluite.
za ovo svedoèe svi proroci da æe imenom njegovim primiti oprotenje greha svi koji ga veruju.
ထိုသခင်ကို ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် နာမတော် အားဖြင့် အပြစ်လွှတ်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးကို ခံရကြလတံ့ဟူ၍ မရောဖက် အပေါင်းတို့သည် ထိုသခင် ၏ သက်သေခံဖြစ်ကြသည်ဟု ပေတရုမြွက် ဆို၏။
znajuæi da svaki to uèini dobro ono æe i primiti od gospoda, bio rob ili slobodnjak.
jovan odgovori i reèe: ne moe èovek nita primiti ako mu ne bude dano s neba.
ယောဟန်က၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ ပေးတော်မမူလျှင် လူသည် အဘယ်အရာကိုမျှမခံနိုင်ရာ။ ငါသည် ခရစ်တော်မဟုတ်။
zato vam kaem: sve to itete u svojoj molitvi verujte da æete primiti; i biæe vam.
ထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ကျေးဇူးကိုရမည်ဟု ယုံကြည်သောစိတ်နှင့် ဆုတောင်းသမျှ တို့ကို ရကြလိမ့်မည်။
a onaj koji sadi i koji zaliva jednaki su; i svaki æe primiti svoju platu po svom trudu.
သို့သော်လည်း၊ စိုက်ပျိုးသောသူနှင့် ရေလောင်း သောသူသည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်၍၊ အသီးအသီး မိမိ လုပ်သည်အတိုင်း မိမိအကျိုးကို ခံရလိမ့်မည်။
nego i za nas, kojima æe se primiti ako verujemo onog koji vaskrse isusa hrista gospoda naeg iz mrtvih,
ငါတို့အကျိုးအလိုငှါရေးထားသတည်း။ ငါတို့ သခင်ယေရှုကို သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသော သူကိုငါတို့သည် ယုံကြည်လျှင်၊ ထိုယုံကြည်ခြင်းကို ငါတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟု မှတ်တော်မူလတံ့။
ja dodjoh u ime oca svog i ne primate me; ako drugi dodje u ime svoje, njega æete primiti.
ငါသည်ခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့် ရောက်လာသော်လည်း သင်တို့သည်ငါ့ကို လက်မခံကြ။ အခြားသော သူသည် မိမိအခွင့်နှင့်ရောက်လာလျှင် ထိုသူကို လက်ခံကြလိမ့်မည်။
i videh ga gde mi govori: pohitaj te izadji iz jerusalima, jer neæe primiti svedoèanstvo tvoje za mene.
သခင်ဘုရားက၊ သင်သည်ကြိုးစား၍ ယေရုရှလင်မြို့မှ အလျင်အမြန်ထွက်သွားလော့။ ငါ၏ အကြောင်းကို သင်သည်ပြော၍ သက်သေခံသော စကား ကို ဤလူတို့သည် မခံဘဲနေကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော် မူလျက်ရှိသည်ကို အကျွန်ုပ်မြင်လေ၏။
သို့ရာတွင် အင်္ဂါပိုခြင်း၊ ချို့တဲ့ခြင်း အပြစ်ရှိသော သိုး၊ ဆိတ်၊ နွားကို အလိုလို ပူဇော်သက္ကာဘို့ ပူဇော်ရမည်။ သစ္စာဂတိနှင့်ဆိုင်၍ ပူဇော်လျှင် စိတ်တော်နှင့်မတွေ့။
zato izidjite izmedju njih i odvojte se, govori gospod, i ne dohvatajte se do neèistote, i ja æu vas primiti,
ထိုကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကား၊ သင်တို့သည်ထိုသူတို့အထဲမှထွက်၍ အသီးအခြား နေကြလော့။ မစင်ကြယ်သောအရာကိုလက်နှင့်မျှ မတို့ကြနှင့်။ ထိုသို့ပြုလျှင် သင်တို့ကိုငါသည် လက်ခံမည်။
daani j (Danés>Birmano)tilsyn (Danés>Alemán)ancha sumaj (Quechua>Español)taga singil (Tagalo>Inglés)you do not get tourist (Danés>Español)habr��a abellado (Español>Chino (Simplificado))ranzig (Neerlandés>Francés)tum mere piche kyu pare ho in english (Inglés>Hindi)فیلم سکس دختر جوان (Francés>Inglés)augusta (Danés>Inglés)hindi ako crush nang crush ko (Inglés>Tagalo)ei venganzas (Español>Chino (Simplificado))mangyari muli (Tagalo>Inglés)99 percent (Inglés>Francés)noli esse stultus (Latín>Inglés)ami ki tomar valo bondhu hote pari? (Bengalí>Inglés)kemm (Maltés>Inglés)chydnabyddai (Galés>Inglés)registratie (Danés>Neerlandés)why not today (Inglés>Tagalo)have (Letón>Islandés)estas enojado conmigo (Español>Inglés)granita (Esperanto>Español)bird sanctuary of india (Inglés>Hindi)carpe note (Latín>Alemán)